ललितपुरका पुराना स्मारक पर्खाल भत्काएर... :: शान्ति तामाङ :: Setopati
ललितपुरका पुराना स्मारक पर्खाल भत्काएर खुला गरिने
शान्ति तामाङ काठमाडौं, कात्तिक २१
ललितपुर महानगरका भवन तथा मैदानका गरी चार ठाउँका पर्खाल भत्काइने भएको छ। पुराना भवनका अगाडि ठडिएका अग्ला पर्खाल भत्काएर महानगरले त्यहाँ बार मात्र लगाउने तयारी थालेको छ।
यी चार ठाउँ पुल्चोकस्थित इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, जाउलाखेल फुटबल मैदान, लगनखेलस्थित बुद्धि विकास मण्डलको मैदान र संयुक्त राष्ट्रसंघीय भवनका पर्खाल हुन्।
पर्खालभित्र घेरिएर रहेका पुराना भवनका कला, बनावट र खुला ठाउँ सर्वसाधारणले सहजै देखून् भनेर यो काम थालिएको महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले जानकारी दिए।
‘हाम्रो महानगरमा सार्वजनिक जग्गा कम छन्। जग्गा किनेर हामी पार्क बनाउने अवस्थामा छैनौं। एक आना जग्गाकै करोडौं पर्छ,' मेयर महर्जनले भने, 'त्यसैले यी भवनका पर्खाल भत्काएर बार लगाउने काम सुरु गर्न लागेका हौं। यी पनि एकप्रकारका खुल्ला स्थान नै हुन्।'
सबभन्दा पहिले इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट काम सुरु हुने उनले बताए।
उनका अनुसार संस्थानभित्रका भवन राणाकालीन हुन्। यहाँका मौलिक हुन्। वास्तुकला निकै राम्रो छ। बगैंचा, पोखरी, फोहोरा र सजावट छन्।
यहाँको आनन्द निकेतन भवन पुरानो दरबारमध्ये एक हो। यो क्याम्पसको मुख्य भवन पनि हो। यहाँ ठूलो फराकिलो बगैंचा छ। बगैंचाको राम्रो व्यवस्थापन पनि छ। भवनको ठीक अगाडि पोखरी छ। फाउन्टेन छ। भित्र यी सबै भए पनि यहाँ नछिरेकालाई यसको अन्दाजसम्म हुन्न।
‘तर बाहिर ठूला पर्खाल ठडिएका छन्। बाटोमा हिँड्ने बटुवाले भित्र के छ, देख्न पाएका छैनन्। त्यो त ल्हासामा सुन छ। कान मेरो बुच्चै भनेझैं भयो। यहाँभित्र छिर्नेबाहेक कसैले देख्न नसक्ने। त्यसैले यो योजना अगाडि बढाएका हौं,’ उनले भने।
आनन्द निकेतन भवन अगाडिको पर्खाल भत्काएर बार लगाउन ७० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान महानगरको छ। यो लागत यहाँ लगाइने बार डिजाइन गरेर निकालिएको हो।
मेयर महर्जनका अनुसार खुल्ला जग्गा बढाउने नीतिअनुरुप सार्वजनिक जग्गामा रहेका महत्वपूर्ण भवन, बगैंचा सार्वजनिक गर्न लागिएको हो। अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अनुसार कुनै पनि महानगरपालिकामा ३० प्रतिशत खुल्ला जग्गा हुनुपर्छ। ललितपुर महानगरमा भने करिब चार प्रतिशत मात्र खुल्ला जग्गा छ।
‘म वासिङटन डिसी जाँदा राष्ट्रपति भवन ह्वाइट हाउस अगाडि बसेर फोटो खिचेँ। जो पनि त्यहाँ पुग्दा नियाल्छन्। कारण त्यहाँ बडेमान पर्खाल छैन। बार छ। बाहिरबाट त्यहाँभित्रको राम्रो बगैंचा देखिन्छ। पोखरी छ। फाउन्टेन छ। राती झिलिमिली बत्ती बलेको हुन्छ,' मेयर महर्जनले सुनाए, 'त्योभन्दा पर ह्वाइट हाउस छ। जुन बटुवाले पनि सजिलै देख्न सक्छन्। आनन्द निकेतन ह्वाइट हाउसभन्दा राम्रो छ। हाम्रो पौराणिक शैली झल्किएको छ। तर मान्छेभन्दा अग्ला पर्खालबाट कसरी अवलोकन गर्ने?'
पर्खाल भत्काएर नयाँ बार लगाउन इन्सिच्युट अफ इञ्जिनियरिङका डिन र क्याम्पस प्रमुखसँग कुराकानी भएर नै योजनाले अन्तिम रुप लिएको महर्जनले बताए। बार लगाउन महानगरले अध्ययन संस्थानकै विद्यार्थीहरूसँग सुझाव मागेको हो। महर्जनका अनुसार विद्यार्थीबीच कस्तो बार राख्दा राम्रो होला? भनेर प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। उनीहरू मध्येबाटै पहिलो हुनेको डिजाइन महानगरले प्रयोग गर्ने भएको हो। नयाँ बारको टेन्डर पनि चाँडै निकाल्ने तयारी रहेको उनले बताए।
महानगरले बार लगाए पनि बगैंचा भने संस्थानले नै व्यवस्थापन गर्नेछ। फाउन्टेन र रुखमा बत्ती लगाउने छ।
संस्थानपछि महानगरले जाउलाखेल फुटबल मैदानमा लगाइएको पर्खाल भत्काउने तयारी गरेको छ। यो काम पनि यसै वर्ष थाल्ने योजना छ।
‘भित्र फुटबल मैदान छ। मान्छे खेल्छन्। भित्र आउनेले देख्छन्। तर बाहिर हिँड्नेलाई के छ-के छ,' उनले भने, 'सबै छोपिएको छ। भित्रको मैदान त हरियाली छ। त्यो हरियाली बाहिर हुनेले पनि देखून् न।'
फुटबल मैदानपछि अर्को योजना लगनखेलको बुद्धि विकास मण्डलको राजदल छेउको पर्खाल हो।
यी तीन ठाउँको नतिजा राम्रो भएपछि महानगर युएन बिल्डिङतिर जाने महर्जनले जानकारी दिए।
‘समस्या वा सुरक्षाको कुरा गर्दा ह्वाइट हाउसलाई लिउँ। संसारको सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति बस्ने ठाउँ हो। तैपनि त्यहाँ फेन्स लगाइएको छ। विशाल पर्खाल नभएकै कारण कुनै समस्या आएको छैन,’ उनले भने, ‘मैले एकैचोटि युएन बिल्डिङ तोकेको होइन। त्यसो गर्न हुँदैन पनि। यी तीन ठाउँका काम सफल भएपछि हामी त्यता जाने हौं। सम्बन्धीत व्यक्तिसँग कुरा गरिसकेका छौं। तपाईंहरूको सुरुवाती काम हेरौं। त्यसपछि हेडक्वाटरसम्म कुरा पुर्याउँछौं भन्नुभएको छ।’
यसका लागि महानगरले परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै काम अगाडि लैजाने भएको छ। यहाँको काम सक्न दुई करोड १० लाख बजेट लाग्ने अनुमान छ। इञ्जिनियरिङ संस्थानमा काम सुरु भएपछि अन्य ठाउँको टेन्डर निकाल्ने महानगरले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २१, २०७५, ०५:३९:००